Disadisa eo anivon’ny JIRAMA: Mijanona ho mpanelanelana ny minisitera, hoy ny Minisitra Andriamanga Vonjy
jeudi, 14 mars 2019 09:33
Sary: Jirama Ofisialy
Nivoitra io omaly alarobia maraina, raha nitsidika ny masoivohon’ny JIRAMA etsy Soanierana Antananarivo ny minisitry ny rano, ny angovo ary ny akoran’afo, Andriamanga Vonjy ka nihaona tamin’ny mpiasa tao.
Noresahin’ny Minisitra ny mikasika ny fitokonan’ny sendikan’ny mpiasa, ka nilazany fa efa nisy fihaonana in-droa miantoana saingy tsy tonga nanatrika izany hatrany ny ampahany amin’ireo sendika misy eo anivon’ny orinasa JIRAMA. Mijanona ho mpanelanelana ny disadisa misy hatrany anefa ny minisitera, hoy ny Minisitra.
Mikasika ny fanapahan-jiro na « délestage » dia nambaran’ny minisitra fa noho ny ezaky ny rehetra dia tsy misy intsony ny delestazy ekonomika. Olana ara-teknika no miteraka fahatapahan-jiro eto Antananarivo fa tsy delestazy vokatry ny tsy fahampian'ny solika intsony, satria dia efa nampitomboina ny tahirin-tsolika ampiasain'ny JIRAMA amin'ny famokarana herinaratra.
Mikasika ny any amin’ny faritany, dia efa mametraka fepetra hanafoanana ny delestazy ny minisitera, saingy vonjy maika ihany aloha izany. Ny vahaolana maharitra nolazain’ny Minisitra dia ny fanorenana tobim-pamokarana mandeha amin’ny angovo azo avaozina.